Impilo, Ukuyeka ukubhema
ngobudedengu kwaBantu nemiSebenzi lightheadedness kukhona kuyabamangaza! Inani elikhulu labantu nsuku zonke, bazifake omunye imikhuba eyingozi kakhulu emhlabeni. Nokho, iningi ukuba baqaphele ukuthi ukubhema - umsebenzi elimazayo futhi okungenamsoco, kodwa awukwazi noma awufuni ukushintsha noma yini ekuphileni kwami.
Into embi kakhulu wukuthi abantu ngokuvamile uqale ukubhema esemncane, 13-15 iminyaka, uma kungekhona ngokushesha. Njengoba Bathi, zonke izindlela zinhle ukulwa yokulutha kukagwayi. Kodwa eqinisweni lezi zimali alikho ngempela, kodwa ukusebenza kwabo kangako. Futhi okwamanje ... Lapha, ngokwesibonelo, i-poster ngokumelene ukubhema: indlela engasiza inkulumo-ze abukelwe ekulweni nobhubhane kagwayi? Ake ukubhekana nale nkinga.
Anti-ukubhema umthetho ngo-2014
umthetho Basic ngokumelene yokubhema liye ezamukelwe ngu Duma State kudala njengoba 2013. Sasingavunyelwe kakade kwethulwa imikhawulo ababalulekile ku ukudayiswa imikhiqizo kagwayi nokubhema. Kusukela 1st June 2014 wethula ingxenye yomthetho yesibili esiqinile okuningi. Imithetho emisha kakhulu nomkhawulo amalungelo ababhemayo, zenzelwe ukukhulisa ukuvikelwa abangabhemi labantu.
UMthetho ukubhema ngo-2014 onqabela ukubhema zonke izinhlobo zokuthutha umphakathi, kanye izindiza. Awukwazi ukukwenza futhi iziteshi zasendlini, izikhumulo zezindiza, ulwandle kanye emfuleni emachwebeni, eziteshini ngesitimela, emafulethini izindawo, zommbila, zokudlala, amabhishi, eziteshini uphethiloli kanye ezindaweni zokusebenza. I izindawo zokudlela, amathilomu kanye nemigoqo, ngokuvumelana iphrojekthi, futhi akukho muntu obhemayo.
Izinhlawulo nezindlela zokuzivikela
Ngaphansi komthetho omusha, izinhlawulo alandelayo anikelwe: Njalo violator kumele akhokhe inhlawulo ka ruble 500. 1500. Kodwa abanikazi amathilomu nezindawo zokudlela, indiva le mithetho evimbelayo kuyodingeka ibhaxa out nakakhulu futhi wenze cashier isimo kusuka 30 kuya kwezingu-90. Ruble. manje futhi akuvumelekile iyiphi inkulumo-ze ukubhema.
Kodwa izikhangiso ezikhuthaza indlela yokuphila enempilo futhi ukuchaza abantu ukuthi ukubhema kuyingozi futhi kukhona umsebenzi kuyingozi kakhulu, ngokuphambene, wamukelekile. Iziqubulo ngokumelene ukubhema nemaphosta ongawathumela kunoma iyiphi indawo yomphakathi: emgwaqeni, ezitobhini zamabhasi, izikole, amahhovisi kanye nezitolo. Konke lokhu kungaba kubhekwe njengengxenye izinyathelo zokuvimbela ngokumelene ukubhema. Lokhu ukukhangisa enempilo omkhulu okwaziyo kancane kancane ukuba "reprogram 'uvalo ngithuka zabantu zanamuhla futhi ukugxilisa isifiso esikahle.
Baphi izifiso, noma Kungani abantu kudingeka ukukhangisa?
Ingabe wake wazibuza ukuthi kungani kukhona ukukhangisa kangaka? idolobha Modern okuchichimayo "ehlotshisiwe" ngazo zonke izinhlobo zezinto amaphosta, belulekwa ukuthenga umkhiqizo othize. Strange, ngoba lezi izingcingo ikakhulukazi akekho ifundeka kanje, kodwa, nokho, abakhiqizi siqhubeke ukhokhele ukukhangisa imali eningi. Futhi uma benza kanjalo, kusho ukuthi kunomthelela ethola inzuzo labo elikhulu.
Yini inkinga lapha? It kuvela ukuthi yonke le nto e umthelela kancane kancane lo mkhankaso ku enganakile womuntu. Yebo, ungakwazi kuphela ukubamba amazwibela ubuhle isithombe kunoma yimuphi umkhiqizo sayo abese ekhohlwa yiso. Kodwa ingqondo enganakile silungise ngokucacile ulwazi. Futhi lapho esitolo phambi uzobe umbuzo lokuzikhethela, ungase bengazi makudle umkhiqizo okuyinto muva wabona ku-billboard.
kanjani amaphosta anti-ukubhema
Iphosta ngokumelene ukubhema isebenza kahle ngendlela efanayo kuzo zonke izingxenye kokujwayelekile PR-imikhankaso! Libuye libe hlobo lokukhangisa, kuphela kube nomphumela omubi. Manje ukukhangisa okukhuthaza ugwayi akuvunyelwe. Kuhle kakhulu! Asithathe enkonzweni PR nakho futhi sizobe beat abakhiqizi ugwayi ngezikhali zabo - ezikhankasela ngendlela enempilo kanye nokusabalalisa mass ulwazi mayelana nemiphumela elimazayo nicotine.
Izibalo zibonisa ukuthi lapho ku usikilidi amaphakethe babé izincwadi ezinkulu ephrintiwe amazwi: "Ukubhema ukubulawa", isibalo bedayisa imikhiqizo kagwayi kwehle kakhulu. Iphosta ngokumelene ukubhema asikwazi ukuba ngaphansi ngempumelelo. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi izingane nentsha. Abaningi babo ngeke bathathe usikilidi wakhe wokuqala futhi ngaleyo ndlela ngeke zisindise asemrarweni kamuva.
Ugwayi elibi umzimba womuntu
On zokubhema uthi njalo. Kwesinye isihloko iDemo akunakwenzeka ukuba uhlu zonke ezintweni ezingezinhle ukubhema. izinguquko sokugembula e umzimba okubangelwa i-nicotine, hhayi kuphela, kodwa izingxenye eziningi eziyingozi eziqukethwe lentuthu kagwayi. Vuma cishe zonke izinhlaka, futhi kwasekuqaleni - esimiso senhliziyo nemithambo yegazi kanye broncho-yamaphaphu lomuntu. I nengozi yokuba nesifo somdlavuza wama-phaphu noma yisifo senhliziyo ababhemayo kuqhathaniswa ne ongabhemi, kwandisa izikhathi eziningi.
Inkinga ethile kuba umkhuba okubhema phakathi bafati labasebasha nemantfombatana, eseyintombazane - ungunina esizayo. idatha Impilo abonisa ukuthi, njengoba nomthelela omubi empilweni womntwana ukuthi unina ngibhema ngesikhathi sokukhulelwa, noma ngisho nangaphambi. Zonke izingozi ikani isicupho ubhema, ungakwazi ngokucace futhi ngokucacile zibonisa poster ngokumelene ukubhema. Futhi izosebenza kangcono kakhulu kunokuba iziyalo ngamazwi. Njengoba isisho sibonisa: "Kungcono ukubona kanye ..."
Kungani kunzima kangaka ukuyeka ukubhema
Akufanele yini kangaka asilahle abantu abangakwazi ukuyeka ukubhema. Iqiniso ukuthi i-nicotine Unjengomahluleli izidakamizwa esikhohlisayo kakhulu futhi ngempela umlutha. Umzimba womuntu ebandakanyeke ukuluthwa ngonya, kudinga umnikazi entry unomphela aba yigazi kwezidakamizwa izidakamizwa, futhi uma kwenzeka ukwehluleka kunosikilidi ovamile kuletha isimo like breaking. Izinyathelo ngokumelene ukubhema kungabangela ukuzama ukubeka eceleni ugwayi kusuka empilweni yakho, kodwa ngeke bakwazi lula yesikhashana eziya ziba zimbi isimo impilo obhemayo wangaphambili.
Manje zicabange ukuthi umuntu angakwazi ukuzwa, elalibhema iminyaka eminingi, bese ukuyeka lo mkhuba wabo. Ikhanda, ukuqwasha, ukukhwehlela, acasulwe ubala, futhi ngisho imfiva scary - konke lokhu "kweqembu" uyakwazi ubuyele ukuthatha usikilidi esandleni. Ngakho abantu abazama ukuyeka ukubhema, kodwa sekhefu kufanele luphathwe ukuqonda nokubekezela. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ngokuphathelene okuthile kwezihlobo eziseduze ophilayo nohlangothi indoda eceleni.
Yini okufanele kuboniswe amaphosta ngokumelene ukubhema
Namuhla, kunenqwaba amasampuli ukukhangisa, ngokumelene ukubhema. Kodwa akuzona zonke poster ukufeza umsebenzi walo. Futhi ezinye inkulumo-ze amateurish usebenza abaculi nokuwubuwula kungalimaza ngisho futhi eziholela umphumela ohlukile. Okuphezulu kwezinhlangothi ezibalulekile kakhulu poster anti-ugwayi yilezi: Ulwazi, imizwelo kanye nokuphuthuma.
Hhayi siyaphazamisa zivimbele izakhi bezibona kumele sisetshenziswe njenge ayekhulekela ezinemibala egqamile futhi, ezingalungile noma esibi ifonti amahlaya. Isithombe akumele ziphazamise okuqonda sibonwa, kunalokho, kuhloswe ukusiza gxila umcondvo lobalulekile - ngezingozi izingozi zokubhema. Ngesikhathi esifanayo akufanele kube khona ukusabisa abavamile. Ukuyaluza "ikhanda" ngokuvamile aliholeli nomphumela ofiselekayo.
Amasampula amaphosta ngokumelene ukubhema
Lesi sihloko sibonisa amaphosta ngokumelene ukubhema. Isithombe oyisebenzisayo, bayakwazi ukwenza ngayo abantu bacabange ngempilo yabo kanye nendlela yokuphila. Mhlawumbe bangakwazi ngaphandle ihaba ubizwe izibonelo ezinhle kakhulu zabantu "antismoking" ukukhangisa.
Impilo yethu kufanele ukhathazeke lokuqala zonke thina. On okuyinto emoyeni ingena amaphaphu ethu, akuxhomekile nje kuphela esimweni isikhathi yezimpilo zethu, kodwa ekugcineni, injabulo abantu abaseduze kakhulu nawe futhi obakhonzile. Hlale ukhumbula lokhu uma ufuna ukuletha usikilidi emlonyeni wakhe!
Iculo le-Cigarettes Electronic Ego CE4. Incazelo yomkhiqizo futhi izici zako ezisemqoka
Kent - osikilidi onekusasa enkulu
"Tabameks" iconsi ukubhema: ukubuyekezwa, ukwakheka, yokusetshenziswa, analogs. Ukwelashwa yokuba umlutha kagwayi
Kungani abantu baseRussia like osikilidi Belarusian?
Ngokukhethekile evikelwe izingxenye imvelo nezimfunda. Izimila Nezilwane we emathafeni
Incazelo enokwehla - Iyini?
Sledge-stroller - okungcono ebusika ezokuthutha izingane.
Abafundi izimbuzi Kungani leli fomu?
"Kairos": Izibuyekezo zabantu bangempela
Vaz-2113 - ezakudala entsha yokuphila
ZyXEL Keenetic Extra: ukubuyekezwa. ZyXEL Keenetic Extra: ukumisa router